आज सोमबार बहराइन दिनारको भाउ बढ्यो, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/आज सोमबार बहराइन दिनारको भाउ बढ्यो, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ?
आज सोमबार बहराइन दिनारको भाउ बढ्यो, हेर्नुहोस् अन्य देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौ, असार १५- आज नेपाली बजारमा सोमबार बहराइन दिनारको भाउ उकालो लागेकाने छ । त्यस्तै आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ ४६ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३६ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ। छ भने आज युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८७ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तैगरी आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ७४ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ ३४ पैसामा झरेको छ । भने आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३२ रहेको छ।
भने आज असार १५ गते बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२० रुपैयाँ २२ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ। त्यस्तै गरी आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। भने आज सोमबार कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९२ रुपैयाँ २० पैसा तथा बिक्रिदर ३९४ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १४ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ। भने आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ।